U Aung Lynn appointed as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the United States of America – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Aung Lynn, Permanent Secretary / Director-General of the ASEAN Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the United States of America.
Dated. 18 July 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်လင်းအား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်